ဘလက်ဆွဲသော nozomi ပုံကြမ်း။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » ဘလက်ဆွဲသော nozomi ပုံကြမ်း။
ဘလက်ဆွဲသော nozomi ပုံကြမ်း။
Posted by black chaw on Dec 21, 2011 in Myanmar Gazette, Opinions & Discussion | 25 comments
နိုဇိုမိ ရဲ့ နိုဇိုမိ
nozomi ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့ ရွာသားအသစ်တွေက ဘူတန်သွားတောလား နှင့် တွဲ၍ မှတ်မိနေကြပါသည်။
ဘူတန်ဘုရင် နှင့် သူ့ မိဖုရားငယ်ငယ်ချောချောလေးပုံကို ရအောင်တင်ပေးနိုင်သော nozomi ကိုးခင်ဗျ။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ကျွန်တော် ဖတ်ဖြစ်တဲ့ nozomi ပို့စ်လေးတွေက သပ်သပ်ယပ်ယပ်လေးတွေနှင့် စံနစ်ကျလှပနေတာ သတိပြုမိပါသည်။
သူ့ပို့စ် အချို့အကြောင်း ကျွန်တော် နည်းနည်း ပြန်ပြောပြချင်ပါသည်။
(၁) ရပိုင်ခွင့် နှင့် တာဝန်
အငှားကား ၀ယ်ထောင်ထားသူ မိတ်ဆွေဝန်ထမ်း၏ အတွေ့အကြုံနှင့် ELEVEN ဂျာနယ်ပါ ဆရာ စိုးဘားဒိုင်ရဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို ဖေါ်ပြပြီး သူပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ လေးကို ပေးသွားတာလေးပါ။
သူပေးချင်တာလေးကို နည်းနည်းလေး ကောက်နှုတ်ဖေါ်ပြခွင့်ပြုပါ။
ဒီရက်ထဲ သတင်းစာတွေမှာ ရပိုင်ခွင့် နဲ့ တာဝန် ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး ခဏခဏ တွေ့မိတယ် အခုကိစ္စတွေနဲ့ ဆက်စပ်စဉ်းစားကြည့်မိတာ လူတစ်ယောက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ထိုက်သင့်တဲ့ ရပိုင်ခွင့်ဆိုတာ ယူပြီး၊ရပြီးရင် သူကျေကိုကျေရမဲ့ တာဝန်ဆိုတာက ကပ်ရပ်ပါလာမှာပဲ ရသင့်တာလဲယူ ကျေသင့်တာလဲ ကျေဘို့လိုမယ်
“အခုလိုပြောဖြစ်တာ သက်ဆိုင်တဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ ၊ကုမ္မဏီတွေ၊ လေကြောင်းလိုင်းတွေ ကို အပြစ်တင်တဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူး ၊
ဖြစ်ပြီးခဲ့တာတွေက ပြန်ပြင်လို့တော့ မရနိုင်ဘူး ၊ သက်ဆိုင်တဲ့ လူတွေရော ၊အလားတူလူတွေရော ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကနေ သင်ခန်းစာတွေ ကောင်းကောင်းယူနိုင်မှ နောက်ထပ် ဒါမျိုးအမှားတွေ ဖြစ်မလာမှာပါ မယူတတ်ရင်တော့ ဆရာသန်းထွန်း စကားနဲ့ပြောရရင် ငတုံး၊
ငအတွေ ဖြစ်နေဦးမှာပဲ .. အားလုံး ရသင့်တာလဲယူ ကျေသင့်တဲ့တာဝန်လဲ ကျေစေချင်ပါတယ်”
ဒီပို့စ်ကတော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သိတ်မကြာသေးတဲ့ အချိန်ကပို့စ်မို့လို့ တံခါးစောင့်ကြီး ပို့စ်မှာ ရေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
မဖတ်ရသေးသူများအတွက် လင့်လေး ရှာထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
(၃) မှိုရတဲ့ မျက်နှာ (၁)၊ (၂)
ဒီပို့စ်ကတော့ ငွေနှင်းမှို စိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းကို ဓါတ်ပုံတွေပါရိုက်ထည့်ပြီး အသေးစိတ်ရေးထားပေးတဲ့ ပို့စ်လေးပါ။
ကိုသစ်မင်း ရဲ့ ကွန်းမန့်လေးက ကိုနိုဇိုမိရဲ့ စေတနာကို ပေါ်လွင်စေမှာမို့ ဖေါ်ပြခွင့်ပြုပါ။
ရေးမဲ့ရေးတော့ တကဲ့ Applied Business ကြီးဘဲ။
(၄) this, too, shall pass away
ပို့စ်ထဲမှာပါတဲ့ သူ့ရဲ့ လေသံလေးကို နည်းနည်းဖေါ်ပြပေးမယ်ဗျာ။ ဖတ်ပြီးသားဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်နေမှာပါ။
အဆင်ပြေနေတာတွေ ၊ ကြည်နှုး ကျေနပ်စရာ တွေကလဲ ခဏချင်း ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ် သတိ လက်လွတ် သာယာ ပျော်မြူး မနေပါနဲ့ ၊ ကိုယ်မျှော်လင့်တဲ့ အတိုင်းဖြစ်မလာခဲ့ဘူး အခက်အခဲတွေ အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ ရရင်လဲ စိတ်ညစ် စိတ်ပျက်ဖြစ်မနေပါနဲ့ ဒါကို ရင်ဆိုင် ကျော်လွှားနိုင်တဲ့နည်း ၊ ဖြေသိမ့်နိုင်မဲ့ အချိန်ဆိုတာ တွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ် အချိန်တန်ရင် အားလုံး ပြီးသွားမှာပါ “ this, too, shall pass away ” လို့ စိတ်ထဲကနေ ပြောနေ မိပါတယ် ၊ သူကတော့ ကြားနိုင်ပါ့မလား နားလည် နိုင်ပါ့မလား ….
VIP ဖွဲ့ nozomi ဗားရှင်းလို့ ခေါင်းစဉ်တတ်ချင်ပါတယ်ဗျာ။ အဲဒီပို့စ်လေးမှာပဲ nozomi က သူ့မွေးနေ့လေးအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတွေ ပေးကြဘို့ ကွန်းမန့်လေးနဲ့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဗျာ။
ပထမက ဒီပို့စ် ကို အေးအေးဆေးဆေး ရေး မနက်ဖြန်လောက်မှ တင်မလို့ပါ
ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့နဲ့ မနက်ဖြန်က ခရီးတိုလေးတွေ သွားစရာရှိလို့ အစောဆုံး သဘက်ခါမှ ရွာထဲပြန်ဝင် နိုင်မှာမို့ အခု အမြန်လက်စသပ် တင်လိုက်ရတာပါ
သဘက်ခါ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်နေ့ က ကျွန်တော့ မွေးနေ့ပါ ၊ ရွာထဲ ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန် ကျွန်တော့်ကို ချစ်ခင်တဲ့ ရွာသူ၊ရွာသား တွေရဲ့ မွေးနေ့ အမှတ်တရ စကားလေးတွေများ ဖတ်ခွင့် ရရင် ဘယ်လောက်တောင် ပျှော်ဘို့ကောင်းမလဲ မသိ ၊ တွေးကြည့်တာနဲ့တင် ရင်ခုန်နေရပါပြီ
ကျွန်တော်ကသာ အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာမှ အဖြစ်မရှိတာ ၊ ဦးကျော်သူ၊နီကိုရဲ၊ နန္ဒာလှိုင် တို့နဲ့ တစ်ရက်ထဲမွေးတာပါ
ဦးကျော်သူ ရဲ့ အနုပညာ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်း အားပေးတဲ့သူတွေလဲ ဦးကျော်သူအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး၊ အားပေးစကားလေးတွေ ပြောပေးရင် ၊ ပရင့်ထုတ်ပြီး အခြေအနေပေးတာနဲ့ ဦးကျော်သူဆီ ပို့ပေးပါမယ် (သူကြီးကို အားကျလို့..)
ရွာသူရွာသားတွေကလည်း nozomi ရဲ့ မွေးနေ့လေးအတွက် ၀ိုင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ကြတာ ကွန်းမန့်ပေါင်း ၃၈ ခု အထိ ဖြစ်သွားရပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ သူကြီးရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း ကွန်းမန့်လေးကို အမှတ်တရပြန်ဖေါ်ပြချင်ပါတယ်။
နိုဇိုးမိ ကိုဂျပန်မှာ ရထားစီးရင် တွေ့တွေ့ဖူးတာမို့ သတိတရ ရှိတာပါ..။
ကျည်ဆန်ရထား.. အမြန်ရထားလိုင်း တခုရဲ့နာမယ်လေ..။
ကျည်ဆန်လို့ စူးစူးနစ်နစ်.. ထိထိရောက်ရောက် ဖောက်ထွင်း..ထီတွင်တွေးခေါ်တတ်သူ ဖြစ်စေဗျာ..။
(နောက်ကိုမရောက် ရှေ့ထွင်းဖေါက်သည် ထီထွင်တွေးသည့် နိုဇိုးမိ…။)
ကိုကျော်သူကတော့.. ယူအက်စ်လာတုံး.. သေသေချာချာ မိတ်ဆက်တွေ့လိုက်ရပါရဲ့..။
အမြဲတန်း..ရင်ထဲကရော.. ကိုယ်အားနဲ့ပါ.. အားပေးလျှက်ပါလို့..။
ကျွန်တော်လည်း ဆုတောင်းပေးထားသေးတယ်နော် ကိုနိုဇိုမိရေ။
(၅) KLIA အကြောင်း တစေ့တစောင်း
KLIA ဆိုတာ Kuala Lumpur International Airport ပါ ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြန်မာတွေ တတိယအများဆုံးရှိတဲ့ နိုင်ငံက လေဆိပ်အကြောင်း
ပြောရမှာ နဲနဲတော့ တွန့်မိပါတယ် ဒါပေမဲ့ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ရန်ကုန်လေဆိပ်ဆို ဧည့်သည်သွားကြိုလို့ ၊ ကိုယ်တိုင်ခရီးသွားလို့ ရောက်ဘူးပေမဲ့ ဘယ်နေရာကဘာဆိုတာ သိပ်သိတာမဟုတ်ဘူး ကွာလာလမ်ပူလေဆိပ်ကို ရောက်ဘူးတဲ့ ရွာသားတွေလဲ ဖြတ်သွားရုံဆို သတိထားမိမှာ မဟုတ်ဘူး
အဲဒါကြောင့် အချိန်နဲနဲယူပြီး မရောက်ဘူးသေးတဲ့သူ ရောက်ဘူးသော်လည်း သတိမထားမိသေးတဲ့သူတွေအတွက် ဒေသန္တရဗဟုသုတ အလိုငှာ
အဲဒါပဲဗျာ။ ကွာလာလမ်ပူ လေဆိပ် အကြောင်းကို ဓါတ်ပုံလေးများနဲ့ ရေးသားပေးထားတဲ့ တန်ဘိုးရှိတဲ့ ပို့စ်ကောင်းလေး တစ်ခုပါ။
ဒါကတော့ နိုင်ငံရေး ပို့စ်လေးပါဗျာ။ သူ့ ပို့စ်မှာပါတဲ့ စာသားလေး စိတ်ဝင်စားဘို့ ကောင်းလို့ ဖေါ်ပြပေးပါရစေ။
ကျွန်တော် လက်ခံထားတဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုတာလေးလဲ ပြောချင်ပါတယ် နိုင်ငံ့အရေးအရာတွေကိုလုပ်တာ နိုင်ငံရေးပါ ကျောင်းသားက စာတတ်အောင်သင်မယ် ဆရာဝန်ကလူနာတွေကိုဆေးကုပေးမယ် စာရေးဆရာက အသိပညာဗဟုသုတတွေ တွေ ဖြန့်ဝေမယ် ဒါနိုင်ငံရေး လုပ်တာပါပဲ အခု ဒီပို့စ်လေးတင်လိုက်တာလဲ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံတွင်းကလူတွေ သိသင့်သိထိုက်တာ ဖြန့်ဝေပေးတာဖြစ်လို့ ဒါလဲ နိုင်ငံရေးပါပဲ…….
（၇） နဂါလေးတို့ ပြည်သို့ (၁-၂-၃)
အဲ… ဒီလောက်ဆိုရင် ကိုနိုဇိုမိ ဘယ်လိုစာတွေရေးတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ရွာသူရွာသား အသစ်တွေ ခန့်မှန်းလို့ ရလောက်ပါပြီနော။
ကျွန်တော် ပြောချင်တာက အခုမှ လာမှာပါ။ ကိုနိုဇိုမိ ပို့စ်တွေထဲမှာ ထူးထူးခြားခြား အခန်းဆက်ရေးထားတဲ့ ပို့စ် ၇ ခု ရှိနေပါတယ်ဗျာ။
ခရီးသွားဆောင်းပါးနဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေပါပဲ။ ခရီးသွားတာက သိတ်မထူးခြားပါဘူး။ သွားတဲ့ နိုင်ငံက ထူးခြားတာပါဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ သွားခဲ့တာက ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူနေမှုအဆင့်မြင့်ဆုံးနိုင်ငံ၊အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံ၊ ၀င်ငွေထဲက လှူဒါန်းမှုအရက်ရောဆုံးနိုင်ငံ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုပေးတဲ့နိုင်ငံ၊လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်ဝဆုံးနိုင်ငံ အစရှိတဲ့ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးတွေနဲ့ နော်ဝေး နိုင်ငံကိုပါ။
နော်ဝေးဆီသို့ ဆိုတဲ့ အပိုင်း ၇ ပိုင်းပါ ပို့စ်လေးတွေပါ။ ကျွန်တော် ၀င်ပွားရမယ့် ကိစ္စမျိုး မဟုတ်ပါသဖြင့် ကိုယ်တိုင် ဖတ်ရှုကြရန် တိုက်တွန်းပါသည်။
အခုလောလောဆယ် nozomi ၏ ပုဂံ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်လေးတွေကိုလည်း လင့်လေးတွေ စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ကောင်းကင်ပေါ်က မြင်ရတဲ့ ပုဂံ
nozomi ရဲ့ ပို့စ်လေးတွေကသပ်သပ်ယပ်ယပ်လေးနဲ့ လှလှပပ ပို့စ်လေးများဖြစ်ပါကြောင်း ပြောဆိုရင်း
ကျွန်ုပ်ဘလက်ကို နှုတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါ ခင်ဗျာ။
ကိုရင် နိုဇိုမိ ၏ ပို့စ်လေးများကို
နော်ဝေ ဆီသို့ ဆိုသည့် စီးရီးလိုက် ခရီးသွား ဆောင်းပါးရှည်ကြီးကို
ဖတ်လိုက်မိရာက ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖြစ်ပါသည်။
ကော်နက်ရှင် နှိတ်စက်သဖြင့် ပို့စ် နှစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်။
တစ်ခုကို ဖျက်ပေးပါ သူကြီးရေ။
နောက် ဆရာတစ်ချို့ နှင့် ဆရာမ တစ်ချို့၏ ပို့စ်လေးများကိုလည်း
ရေးချင်ပါသေးတယ်။ ၂၀၁၁ အမှတ်တရ ပေါ့ခင်ဗျာ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဘလက်ချော ခင်များ။
အဘ၀ှိုက်က ရေးလိုက်ရင် ပီပီပြင်ပြင် ရေးလေ့ရှိလို့ အမြဲစောင့်ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာရင်းထဲမှာ ပါပါတယ် …
ဗဟုသုတအများကြီးရတယ် … သပ်သပ်ရပ်ရပ် လုပ်တတ်တာက အတုယူချင်စရာကောင်းတယ် …
အဟောင်းတွေတောင် ပြန်ရှာဖတ်နိုင်တဲ့ ကိုဘလက်ကို တကယ်လေးစားပါတယ် … ဒီလောက်မကောင်းတဲ့ ကော်နက်ရှင်ကြားမှာ တကယ်ဖတ်နိုင်လို့ ချီးကျူးတာပါ ..
ဦးနိုကို တူးပီခည …..
ဘလက်ဆွဲသော nozomi ပုံကြမ်းဆိုလို့ ..
ကိုဘလက်က ပန်းချီလည်း ရတာပဲလားဆိုပြီး ၀င်ကြည့်လိုက်တာ..
အော်… စာပန်းချီ ဖြစ်နေတာကိုး….
ကိုဘလက် အပင်ပန်းခံ ပြီး စာတွေဖတ် စာပုံကြမ်းလေး ဆွဲပေးတာ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ
တကယ်ကတော့ အခု လို ဆွဲပေးတာကို မခံယူဝံ့ပါဘူး
တကယ်ဆို အတွေးအခေါ်ကောင်းတဲ့ ကိုသစ်တို့ အန်တီဝေ တို့လို ဆရာတွေ အများကြီး ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနဲ့ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်ကောင်းတဲ့ ဂီဂီ တို့ ဂိုဏ်းဝင်တွေ လဲ တပုံတပင်
ရေးအားကောင်းတဲ့ ဆူးတို့ အိတုံတို့ ဦးပေါက်တို့တွေလဲ ရှိ
သူကြီး၊ဦးဖက်၊ကိုကြောင်တို့လို အတွေးရဲရဲ အရေးရဲရဲ ဆရာသမားတွေကလဲ များမှများ
ဆက်ပြောရင် လူတော် လူကောင်း ဆရာတွေ အများကြီး ကြောင်းကို ရေးပြီး
နောက်ဆုံးလောက်မှ ရေးရင် ပိုသင့်တော်မယ် ထင်ပါတယ်
တကယ်ဆို ကျွန်တော်အဆင့်က ရွာထဲမှာ ၄၀၀၀ ကျော်လောက် ရှိတာပါ
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုဘလက်ကြီး စေတနာကို အထူးအသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ
ကိုနိုဇိုမီကို ပထမဆုံး white ဆိုတဲ့ နာမည်ကို တူသူရှိလို့ နာမည်ပြောင်းချင်တာ ပြောင်းမရလို့ သူဂျီးကို နာမည် ပြောင်းပေးဖို့ ပြောတာရယ် ကလေးလေးပုံ အဖြူအမည်းဓါတ်ပုံလေး တင်ထားတာရယ်က စပြီး မှတ်မိတယ်။ နောက် ကျွန်မနဲ့ တရပ်ကွက်တည်းသား ဆိုတာသိ၇တော့ ပိုမှတ်မိရော။ နောက် နော်ဝေ အကြောင်းေ၇းတော့ တကယ်ကို စေ့စေ့စပ်စပ်နဲ့ သေချာရေးတတ်သူပါလားလို့ အတုယူပြီး ကျွန်မ ခရီးသွားပို့တွေ ရေးဖို့ သင်ပေးတဲ့ သင်ဆရာထဲက တယောက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဂေဇက်ထဲက ကျွန်မလေးစားရသူတွေထဲက တယောက်အပါအ၀င်ပါပဲ ကိုနိုဇိုမီရေ။
ပန်းချီပြပွဲကို ရောက်သွားရင် ကတ်တစ်လောက် ဝယ်ရတယ်
တို့ ဂေဇက် မှာတော့ ဘလက်တစ်လောက် အလကား ပေးတယ်
စေတနာကြွယ် ၊ ဝေပါဟယ် ၊ ဘလက်တစ်လောက်
ပန်းချီတွေထဲမှာ စကားလုံးတိုင်းလှပတဲ့ စာပန်းချီတစ်ခုပါပဲ။ ဦးဦးဘလက်ရဲ့ စာပန်းချီလက်ရာတစ်ခုပေါ့။ နှစ်ကူးလက်ဆောင်လား…
ကိုနိုဇိုမိ စာကို ဖတ်ရင် သပ်သပ်ရပ်ရပ်၊ စေ့စေ့စပ်စပ် နဲ့ တိကျသေချာသူတယောက်လို့ ခံစားမိလေ့ရှိပါတယ်… … သူ့ရေးဟန်ထဲမှာ သူသဏ္ဍန်က ပေါ်နေလေ့ရှိပါတယ်……
အဲ့ဒါလေးကိုတော့ သူ့စာတွေကို စဖတ်ထဲက သတိထားမိခဲ့တာပါ…..
အဲ့ဒီက တဆင့် နည်းနည်းလေး ချဲ့တွေးလိုက်ရင် လုပ်ငန်းခွင်မှာရော မိသားစုထဲမှာပါ စည်းစနစ်တကျ လုပ်ကိုင်တတ်သူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ … တွေးမိပါတယ်…
ကို အဖြောင်ယူပုံဘယ်လောက်တူလဲလို့ … လာကြည့်တာ … ကိုချောကလက်ကြီးက ပုံတူပန်းချီမဟုတ်ပဲ .. စာပန်းချီဆွဲသွားပါလားဗျို့ …
ဦးနို ရဲ့ ပိုစ်တွေက ဆူး ကို နော်ဝေး ရောက်အောင် လိုက်ပို့ပေးတယ်။
ဘူတန် ရောက်အောင် ပို့ပေးတယ်။
နော်ဝေး ကိုတော့ စိတ်အ၀င်စားဆုံးပါပဲ.. ရောက်ဖူးချင်ပြီး သွားဖို့ အလားအလာ မရှိတဲ့ နေရာ ဖြစ်နေလို့ သိပ်ကို သဘောကျလှပါတယ်။ ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ပြီး စနစ်တကျ သေသေသပ်သပ် ရေးတတ်တဲ့ ဦးနိုရဲ့ ပိုစ်တွေကို ဖော်ထုတ်ပေးတဲ့ ဦးဘလက် ကိုလည်း အားရမိပါတယ်။
ဦးနိုကိုတော့ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ကလေးမက မရဲတရဲလေး ချီးကျူးပါကြောင်း
မတူတဲ့ အတွေးနဲ့ မန့်မယ်ဂျာ
ဒါမှဒုက္ခပဲ မတူတဲ့ဟာနဲ့ မန့်မယ်ဆိုမှ အကုန်းလုံးက ချီးကြူးနေကြတော့ …
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်တင်၊ ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံနေကြတာကို
ဂေဇက် ရွာလေးရဲ့ ကိုယ်စား (ကိုယ်စားလို့ ပြောရအောင် မင်းက ဘာကောင်လဲဆိုတော့… ဘာကောင်မှ မဟုတ်တဲ့အတွက် တိုးတိုးလေးပဲ ပြောလိုက်တယ်နော် )၀မ်းမြောက်စွာ ဂုဏ်ယူနေမိပါကြောင်း …..
အဆိုကောင်း အရေးကောင်း အတွေးကောင်း
ကိုရင် နိုဇိုမိကတော့ အရင်က သတိမထားမိပါဘူး၊ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်ရေးသမျှတိုင်းကို အနီကဒ်တွေ ရဲဗလောင်းခတ်ခံနေရအောင် ၀င်ရောက်ထောက်ခံပေးနေတာကို သတိထားမိရာကနေစပြီး လေးစားသမှု ရှိမိပါတယ်။ ကျုပ်ဆိုတဲ့သူ ဘယ်သူ့၊ဘယ်သူမှ (ဆူးကလွဲပေါ့) အားမပေးပါဘဲလျက် စာတွေရေးဖြစ်နေအောင် အားပေးနေတဲ့သူ၊ ထိုလူ ကိုနိုဇိုမိကို လေးစားသမှုနဲ့ ထောက်ခံပေးလိုက်ရပါကြောင်း…
ကိုဘလက် ပို့စ် မှာ အားနာနာ နဲ့ပဲ နဲနဲ ၀င်ပွားလိုက်ဦးမယ်
မဝေ က အတွေး ရော အရေး ရော ကျွန်တော် လေးစားရတဲ့သူပါ ၊ စာများများလဲ ဆက်ရေး ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်ချက်တွေကိုလဲ ကူညီသင်ပြပေးပါဦး
မမှီ နဲ့ ကျွန်တော် ဆို ရွာထဲမှာ စာရေးတာ ကျွန်တော်က နဲနဲတော့စောတယ် ဒါပေမဲ့ မမှီ ရဲ့ ပထမဆုံးပို့စ် ကတဲက ကျွန်တော်လေးစားတဲ့ ဆရာမခင်ခင်ထူး လို လက်မျိုးမို့ သဘောကျပြီး မမှီ ရဲ့ ပို့စ် တိုင်းကို အားပေးရင်း ဗဟုသုတလဲယူ ရေးဟန်ကိုလဲ လေ့လာနေတာပါ ၊ ပြန်လာရင် တွေ့မယ်နော်
ဒေါ် pooch ရေးထားတာ ဖတ်ပြီး တခြားသူတော့ မသိဘူး မဒမ်နိုကတော့ အားရပါးရ ရီတယ် ဗျ၊ ရှင် ရွာထဲမှာသာ စနစ်တကျ ရှိယောင်ဆောင်လို့ ရမယ် ၊ အိမ်မှာ ဘယ်လောက်တောင် စနစ်မကျဖြစ်နေတာ ရွာထဲကို ၀င် ပြောလိုက်ရမလားတဲ့ ၊ ကျွန်တော့်ပို့စ် တွေကို အမြဲ ဖတ် အမြဲ အားပေးနေတဲ့ pooch ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော
ဘွားဆူး ကျွန်တော်လဲ အိပ်မက်တောင် မမက်ခဲ့ဘူးပဲ နော်ဝေ ရောက်သွားခဲ့တာပါ ၊ ဘွားဆူး မရောက်ဖူးလို့ ဘယ်သူအတိအကျ ပြောနိုင်ပါ့မလဲ ၊ သူကြီးဆီတောင် အလည်ရောက်ချင်ရောက်သွားဦးမှာ
ဒေါ်မိုးဇက် ချီးကျူးပေးတယ် ဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်တယ် ၊ အပြင်မှာ တွေ့ရင် ငပိရည် ကြွက်သားပေါက် နဲ့ ဧည့်ခံမယ် ကြိုက်တယ် မို့လား
ကိုကင်း ရွာ ကို ခပ်ကင်းကင်း လေး မလုပ်နဲ့နော် ၊ တစ်ခါ တစ်ခါ မှ ပေါ်ပေါ်လာတယ်
ကိုအောင်မြင် ကို ကျွန်တော် အပြင်မှာလဲ မ မြင်ဘူး ၊လူချင်းလဲ သိတာ မဟုတ် ပေမဲ့ ကိုအောင်မြင်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ရေးဟန်ကို သဘောကျလို့ ရယ် ဗဟုသုတ အသစ်တွေရလို့ အားပေးနေဖြစ်တာပါ ၊ အခုနောက်ပိုင်း ရေးတာ ပြန်စိပ်လာတယ် အဲဒီလိုလေး ရေးပေးပါဆရာရယ်
အခုရက်ထဲ အချိန်မရလို့ ပို့စ်တိုင်းတောင် ဖတ်ဘို့ ဖတ်သီ ဖတ်သီ ဖြစ်နေရတာ ၊ ကိုဘလက် က အချိန်ပေးပြီး ဖတ် ၊ ပြန်ဖော်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ ဗျာ ၊ ကျွန်တော်အခု ထီထိုးထားတယ် ထီ ပေါက်ရင် ကိုဘလက် ကို အခွေထုတ်ပေးချင်လို့
ကျွန်မကို ချီးကျူးလို့ ကျေးဇူးတင်ပေမယ့် မခံယူဝံ့ပါဘူး …
နော်ဝေးဆီသို့ပို့စ်နဲ့တင် ကိုနိုဇိုမိက အလွန်စေ့စပ်သေချာတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ ၁၀၀% သေချာလို့ ကျွန်မကတောင် ပြန်လည်လေးစား အတုယူရမယ့် ဆရာတစ်ဦးစာရင်းထဲမှာ ပါနေခဲ့ပါတယ် …
ဦးနိုလည်း အဲဒီဟင်းလျာကို သဘောကျနေတယ်ပေါ့
ထီဆိုတာက သိပ်သေချာတာမဟုတ်ဘူး …သေချာတာက ပွိုင့်
သည်တော့ …ဘဘ ဘလက်ကို အခွေထုတ်ပေးဖို့ စာများများရေးတင်လေဗျာ….
ဦးနိုတို့လို စာအရေး ကောင်းတဲ့လူတွေ စု ပွိုင့်တွေ စု ပြီး အဆိုကောင်းတဲ့ ဘလက်ဆြာ ကို အခွေဝိုင်းထုတ်ပေး ….
ကျုပ်လဲ စာတွေအတော်လေး ပြန်ရေးနေပါပြီ။ အရင်က စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ စာမရေးတော့ဘူးလို့လက်လျှော့ထားပေမယ့် ခုတော့ ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်လဲနေ၊ ပေးချင်တာတွေတော့ ပေးနေမှာပဲ။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ကိုယ်တွေ့လေ့လာတာထက် သူများကိုယ်တွေ့တွေကိုလေ့လာတာက အရင်းအနှီးတွေ နည်းနည်းနဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေများများရတယ်ဆိုတာ သိစေချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တွေ့တွေကို ပြန်ဝေမျှဖြစ်နေပါတယ်။
စကားမစပ်ဗျာ.. သူကြီးကို ခုတစ်လော ကျုပ် Post တွေမှာ သုံးသပ်ချက်တွေပေးတာမမြင်ရတော့ဘူး။
နိုဇိုးမီကို စာရေးဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ သင်ပြပေးခဲ့သူဟာ ကျနော်ဖြစ်ပါတယ်။ မယုံရင်မေးကြည့်ပါ မဟုတ်ဘူးလို့ ဖြေပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်တာပြောတာကို မဟုတ်ဘူးလို့ ဖြေတဲ့အတွက် အနှုတ်အနှုတ်ခြင်းတူရင် အပေါင်းဖြစ်ခြင်းသဘောအရ ဟုတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို သတိထားမိတာ ဗဟိုထောက်လှမ်းရေး ရေကြည်အိုင်မှာ ကကလှမ်း တိုက်ပွဲထောက်လှမ်းရေး သင်တန်းတက်ကထဲက ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ စူးစမ်းလေ့လာတတ်တဲ့ မျက်လုံးနဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မှတ်တမ်းတင်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိလို့ ခရီးသွားဆောင်းပါးကောင်းများစွာ ထွက်ပါတယ်။
နော်ဝေးအကြောင်းမဖတ်ရသေးလို့ ခုပို့စ်ကနေ ကူးထားတယ်
နေတက်ရေတက် နဲ့နဝင်းကိုက်ပီးမနည်းရွေးထားတာ ဟဲဟဲ
ဇာတ်ညွန်းဆရာကတော့ တယောက်ပြီး တယောက်စင်ပေါ်တင်နေလေရဲ့။
လက်တွေ့တွေကိုပြောပြ ဗဟုသုတပေးနေတဲ့ စွမ်းအားပြည့်ကလောင်ရှင်ဘဲဟာ။